Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny fiasan'ny kerning sy ny fanarahana ny Letters? | Famoronana an-tserasera
Ny elanelam-potoana dia zava-dehibe amin'ny taratasy ary misy fiantraikany amin'ny valiny farany saika ny endriny ihany. Ny famerana ny elanelana ampy eo anelanelan'ny tarehin-tsoratra mandrafitra ny asantsika dia manapa-kevitra amin'ny resaka lova. Ny karazana tarehin-tsoratra izay misy elanelam-potoana kely loatra dia hisoroka ny famakiana tsara satria ny masontsika dia tsy hanavaka ny toerana nifaranan'ny toetra iray ary ny iray hafa manomboka. Toy izany koa, ny elanelam-potoana be loatra dia ho sarotra tokoa ny mampifandray ireo tarehin-tsoratra ary tsy ho fantatsika tsara hoe aiza no manomboka ny teny iray ary mifarana ny iray.
Ao anatin'ity fanontaniana ity dia misy anglicism roa izay tena ilaina ho fantatsika: Fanarahana sy kerning. Fa inona marina moa izany ary inona no vokatr'izany tsirairay avy aminy?
El ampy azo adika amin'ny teny espaniola amin'ny hoe prosa sy dia ny habaka izay ampiana rafitra eo anelanelan'ny litera roa. Hiankina amin'ny estetika sy ny tanjona ananantsika amin'ny tetikasantsika izany. Ny abidia misy antsika dia misy tarehintsoratra sasany izay, raha atambatra, dia miteraka olana na kilema optika ary tsy voavaha amin'ny fanarahana amin'ny ankapobeny ary amin'ireo karazana toe-javatra ireo no tena ahazoana tombony.
Mifanohitra amin'izay mitranga amin'ny fanarahana, kerning tsy misy fandikan-teny manokana amin'ny fiteninay. Azontsika atao ny mahatakatra azy ho sandan'ny elanelana ampiharina eo anelanelan'ny tsiroaroa mba hanonerana amin'ny fomba sasany ny lesoka optique ary amin'izany fomba izany dia toa tsy miray saina kokoa noho ny hafa ny litera sasany.
Ny marina dia tsy misy ny rijan-teny marina sy manerantany milaza amintsika ny atao hoe elanelam-potoana lavorary amin'ny karazan-tsoratra rehetra. Ny zava-drehetra dia hiankina amin'ny fombantsika ary koa amin'ny fahatsapantsika ny typografika. Ny mpamorona sasany dia tia famoronana somary voafintina, fa ny sasany kosa aleony mifoka rivotra kokoa. Na izany aza, maro ireo mpamorona sy manam-pahaizana izay nanandrana nametraka fomba hiatrehana ny olana eo amin'ny elanelam-potoana. Ohatra, tamin'ny 1986, Walter Tracy dia nanandrana nametraka ny làlan-kizoran'ny elanelana marina ao amin'ny bokiny Letters of credit. Ity fomba fanitsiana ity dia mety ho fomba iray tsara hanombohana ny fiasa amin'ny kerning sy ny fanarahana, na dia misy akony lehibe aza amin'ny fanapahan-kevitra sy ny vina ananantsika momba ny tetikasanay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny fiasan'ny kerning sy ny fanarahana ny Letters?
Hevitra 5 tsara indrindra ho an'ny Wordpress an'ny 2015